Miteraha tsipika contour an'ny Google Earth miaraka amin'ny AutoCAD - Geofumadas
Desambra, 2011 AutoCAD-Autodesk, Featured, Google Earth / Maps, topografia
Fotoana fohy izay no niresahako Tools Plex.Earth ho an'ny AutoCAD, fitaovana mahaliana izay ankoatra ny fampidirana, mamorona mozika sary natsangana ary hizara marina tsara, azonao atao ihany koa ny manao fanao mahazatra isan-karazany amin'ny faritra anaovana fandrefesana. Amin'ity indray mitoraka ity dia te hampiseho ny andiana tsipika contour avy amin'ny Google Earth aho.
Angamba ny zavatra namboarin'ny mpandraharaha sivily tafiditra amin'ny teknolojia, dia ny mpampiasa teknika no manantena ny Google Earth amin'ny pejy AutoCAD, miaraka amin'ny fanohanana mihoatra ny rafitra 2,000.
Plex.Earth dia miasa amin'ny AutoCAD 2007 version ho AutoCAD 2012, ho an'ny 32 sy 64 bits.
Ny iray amin'ireo zavatra mahaliana dia ny hoe tsy misy fetrany ny ho dikan-teny fototra, Fahasamihafana CivilCAD izay mitazona kinova feno. Na dia hazavaiko aza, ny CivilCAD dia afaka mamorona tsipika contour fa tsy manafatra sary na modely nomerika avy amin'ny Google Earth.
Fomba hanatsarana hevitra
Manana fomba farafaharatsiny 4 ianao hamoahana ireo hevitra:
Avy amin'ny takelaka (amin'ny Grid): Ho an'ity dia takiana fotsiny ny manondro teboka roa amin'ny sary, ny faran'ny efamira. Ny tombony lehibe amin'ity tranga ity dia ny fihodinan'ny takelaka orthogonal mankany amin'ilay tsipika.
Miaraka amin'ny faritra voafaritra (On Area): Ho an'ity, ao amin'ny AutoCAD dia mifantina polyline isika, na inona na inona ny endrika, dia esoriny izy io ary ny grid dia ho orthogonal mankany avaratra / atsimo.
Avy amin'ny Topy maso ankehitriny: hampiakatra ny endrin'ny fijerintsika manontolo ao amin'ny AutoCAD
Avy amin'ny faritra voafaritra ao amin'ny Google Earth: Tahaka ny faharoa, miaraka amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny faritra ampiasaina amin'ny fametrahana Google Earth
Raha vantany vao voafaritra ny fepetra dia azonao atao ny mampiasa ny S (Settings) na ny bokotra havanana mba hisafidianana ny karazan-javatra izay andrasana halefa:
Ny modely nomerika ho toy ny tany
Avy eo dia asehontsika hoe isaky ny inona no tadiavintsika ny takelaka, ary alohan'ny hanaovana izany dia manontany antsika izy raha azo antoka. Mazava ho azy fa mety haharitra mandritra ny fotoana marobe ny tontolonao, saingy ity dia iray amin'ireo endrika manandanja indrindra, izay mety amin'ny Ny mikrosta mikasa hanao ary Civil3D izay ahitana sary mainty sy fotsy ary tsy misy fefy.
Manaraka izany, asehontsika hoe impiry isika no maniry ny fihodinana lehibe sy faharoa. Ary koa ao amin'ireo sosona no antenaintsika ny zavatra.
Famaritana ny curves
Ny loko misy ny curve dia miankina amin'ny lafin-javatra, jereo ny fomba famolavolana ny fampiasana ny tranokala na ny faritra voafaritra ho fifanarahana.
Ny angon-drakitra anatiny dia azo ampifandraisina amin'ny fanadihadiana an-tsaha, ary ankoatra ny famolavolana ny fifandimbiasana sy ny tontonana, dia afaka manombana ny fahasamihafana eo amin'ny habaka eo amin'ny roa tonta na amin'ny tontonana.
Raha ny hevitro, ny fampiharana tsara indrindra ho an'i AutoCAD izay miara-miasa amin'ny Google Earth, dia mamela tsotra fotsiny ny taratasy fangatahana toy izany ContouringGE izay tao aminy dia sarotra ny nametraka azy. Fampiasam-bola tsara vokariny, raha topografia na volavola ny sahanay.
Mety ho Plex.Earth download for free, nandritra ny fotoam-pitsapana nandritra ny andro 15.
Previous Post«Previous 5 2013 endri-javatra vaovao ny AutoCAD
Next Post Geofumadas, Lova 2011manaraka »
6 Valiny "Hiteraka tsipika contour Google Earth miaraka amin'ny AutoCAD"
guettaouiaz hoy izy:
Febroary, 2020 at
Juan Lopez Jimenez hoy izy:
Aprily, 2013 at
Ao amin'ny menio ankavia dia misy boaty fifanakalozan-kevitra izay hanoratanao ny tsipika contour teny ary amin'izany dia hanana ireo lahatsoratra mifandraika amin'ilay lohahevitra ianao. Eo ambony koa, ao amin'ny menio ambony dia azonao atao ny mitady "all about toography" misy lohahevitra maro voatanisa.
MANENTANA IZANY DIA AZO AZONAO AZONAO AZO AZONAO AZO AZONAO AZO ATSIKA AZO ATAO DIA AZONAO ING. CIVIL ARAHATSORATRA IZY ARY MBOLA EKONDRONA
Manuel Hernandez hoy izy:
pejy tsara, tena nanompo tolotra maro izay nomena eto aho. Sivily aho ary talohan'ny nampiasako ny biraon'ny landy autodesk. Amin'izao fotoana izao dia manomboka mahafantatra ny tenako amin'ny sivily 3D 2012 aho ary kely dia azoko ny zavatra azoko, na dia tsy hita aza aho, betsaka. Tiako ho fantatra raha manana fampahalalana momba ny fomba fizahana topographies novaina izy ireo, hatramin'izao aho dia tonga ihany mba hamorona sehatra, profiles ary fizarana boribory.